I-PCLinuxOS 2019.06 ifika neKernel 5.1 nezinye izibuyekezo | Kusuka kuLinux
Muva nje kukhishwe inguqulo entsha ye-Linux PCLinuxOS 2019.06, okuvele njengokuvuselela izakhi zohlelo. Lokhu kwenzelwa ukuthi abasebenzisi abasha akudingeki balande inani elikhulu lamaphakeji athe xaxa yize besivele besilandile isithombe sohlelo.
I-PCLinuxOS Ukusatshalaliswa kweLinux ngaphambili okwathatha isisekelo seMandriva Linux, kepha kamuva kwakhishwa kwenziwa iphrojekthi ehlukile.
I-PCLinuxOS yehlukile ekusebenziseni i-Debian GNU / Linux APT Package Management Toolkit ihlanganiswe nomphathi wephakethe we-RPM, okungokwesigaba sokusatshalaliswa kwamaselula lapho izibuyekezo zephakeji zikhishwa njalo futhi umsebenzisi angaFinyelela izinhlobo zakamuva zesoftware ngaphandle kokulinda.
Indawo yokugcina ye-PCLinuxOS inamaphakeji azungeze i-14,000.
Ngaphandle kwakho I-PCLinuxOS inombhalo obizwa nge-mylivecd, ovumela umsebenzisi ukuthi athathe 'isifinyezo' sokufakwa kwawo system yamanje (wonke amasethingi, izinhlelo zokusebenza, amadokhumenti, njll.) bese uyicindezela ibe yisithombe se-CD, iDVD noma i-USB ISO.
Lokhu kuvumela umsebenzisi ukuthi akwazi ukwenza isipele kulula kwedatha yomsebenzisi futhi futhi kwenza kube lula ukudala i-LiveCD yakho ye-Live, iDVD noma i-USB.
Ithuluzi lokuhlola inkumbulo elithuthukile nalo lihlanganisiwe kwimenyu yokuqala, okuvumela abasebenzisi abaphambili ukuthi bashintshe amapharamitha we-kernel, abashayeli, futhi basebenzise imodi yehluzo ephephile uma kwenzeka ikhadi labo levidiyo lingasekelwa.
Noma kunjalo ku-PCLinuxOS Singathola ukuthi i-KDE yimvelo yedeskithophu yohlelo, kukhona enye futhi indlela okuyiMate. Ngakho-ke abasebenzisi abasha bangakhetha ukuthi basilande yini isithombe sesistimu nge-KDE noma i-Mate.
Ngokwengeziwe, uma ungazithandi lezi zindawo, kufanele wazi ukuthi ngokwehlukana, umphakathi okhona kulokhu kusatshalaliswa kwe-Linux wenza izinhlobo ezithile nezinye izindawo zedeskithophu. Ukwakhiwa okwenziwe ngumphakathi kususelwa kuma-desktops we-Xfce, MATE, LXQt, LXDE, ne-Trinity.
1 Yini okusha ku-PCLinuxOS 2019.06?
2 Landa bese uthola i-PCLinuxOS 2019.06
Yini okusha ku-PCLinuxOS 2019.06?
Ngokukhishwa kwale nguqulo entsha ye-PCLinuxOS 2019.06 Njengoba sishilo ekuqaleni, izinhlobo ezibuyekeziwe zamaphakeji amaningi wesistimu afika.
Kusuka kulokhu singagqamisa inguqulo entsha ye-Linux kernel 5.1 engeza ukwenziwa okuhle okuhlukahlukene futhi ikakhulukazi ukuxhaswa kwezinto eziningi zohlelo.
Ngakolunye uhlangothi, izinhlelo zokusebenza ezivuselelwe, singazithola izinhlobo ezintsha zemvelo yedeskithophu yohlelo I-KDE 19.04.2, i-KDE Frameworks 5.59.0, ne-KDE Plasma 5.16.0.
Iphakheji eyisisekelo ifaka izinhlelo ezinjenge I-Timeshift Backup Utility, iBitwarden Password Manager, i-Darktable Photo Processing System, i-GIMP Image Editor, i-Digikam Image Collection Management System, i-Megasync Cloud Data Synchronization Utility, uhlelo lokulawula ukufinyelela kude kweTeamviewer, uhlelo lokuphatha uhlelo lwe-Rambox, isoftware yokuthatha amanothi we-Simplenotes, isikhungo se-Kodi media, Isixhumi esibonakalayo seCaliber e-book reader, iphakethe lezimali leSkrooge, isiphequluli seFirefox, iklayenti le-imeyili leThunderbird, isidlali somculo se-Spruce Strawberry nesidlali sevidiyo se-VLC.
Landa bese uthola i-PCLinuxOS 2019.06
Uma ungeyena umsebenzisi wokusabalalisa futhi ufuna ukukusebenzisa kukhompyutha yakho noma uyihlole kumshini obonakalayo.
Ungathola isithombe sohlelo, Kumele uye kuwebhusayithi esemthethweni yephrojekthi lapho ungathola khona izixhumanisi kusigaba sayo sokulanda.
Isixhumanisi simi kanje.
Izithombe zohlelo ozozithola zenzelwe ukusetshenziswa kumodi ebukhoma, kepha futhi isekela ukufakwa kwi-hard drive.
Izinhlobo ezigcwele (1.8 GB) nezincishisiwe (916 MB) zokusabalalisa ezisuselwa kumvelo yedeskithophu ye-KDE zilungele ukulandwa.
Ungagcina isithombe sohlelo kudivayisi ye-USB ngosizo lwe-Etcher okuyithuluzi le-multiplatform noma ungakhetha futhi i-unetbootin.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » I-PCLinuxOS 2019.06 ifika neKernel 5.1 nezinye izibuyekezo